Ny style Letterpress dia fomba iray anaovana indray | Famoronana an-tserasera
Ny style Letterpress dia fomba iray anaovana indray
Jorge Neira | | dia midika hoe
Ny fomba Letterpress dia momba ny teknika iray, izay manolotra ny azo atao pirinty amin'ny alàlan'ny fanindriana ny atiny hatao pirinty, mba sokitra na ny dian-tongony na ny endrinyHo fanampin'izany, ny fizotran'ny fanontana dia azo atao miaraka amin'ny ranomainty na tsy misy.
1 Inona no atao hoe Letterpress?
2 Ahoana ny fomba fanaovana Letterpress?
3 Inona avy ireo taratasy mety amin'ny fametahana taratasy?
3.1 Taratasy fibre
Inona no atao hoe Letterpress?
Ny "Letterpress" dia misy ny Fanendrena anglisy izay mirona ho adika hoe "letterpress".
Toy izany koa, ny style Letterpress matetika izy io no iray amin'ireo be mpampiasa indrindra eo amin'ny endrika izay miasa amin'ny taratasy, satria ny iray amin'ireo antony lehibe indrindra ampiasana azy dia ny fahalalahana omeny rehefa mamorona litera.
Ahoana ny fomba fanaovana Letterpress?
Ny teknika voalohany an'ny style Letterpress, manandrana manao ny famolavolana mampiasa lasitra taratasy na firavaka sasany, mazàna vita amin'ny firaka na hazo afaka mampiasa ranomainty, ho an'ny aorian'ny sy amin'ny alàlan'ny fampiharana ny tsindry, hery mivantana famolavolana pirinty voasoratra amin'ny taratasy.
Satria tsy miparitaka manodidina ny endriny manontolo ny ranomainty, kileman-toetra kely Rehefa mifandray amin'ny taratasy ny bobongolo, ireo tsy fahalavorariana ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fanomezana ny maha izy azy an'io karazana fanontana io, ka izany no nahatonga azy ireo ho tena tian'ny olona misafidy Letterpress.
Toy izany koa, ankoatry ny ranomainty natsofoka teo amin'ny taratasy, dia misy ihany koa lalina lalina eo amin'ny toerana izay ifandraisany amin'ny lasitra.
Raha mivadika ho matevina be ilay taratasy ary misy volony cottony, azo atao ny mahazo a ambany vokany izay manampy firafitra lehibe kokoa rehefa mahazo ny valiny farany. Ary araka ny efa noresahintsika teo aloha, ny Letterpress dia azo atao miaraka na tsy misy ranomainty; Raha toa ka tsy manana ranomainty izy dia antsoina hoe "embossing" na "blow blow".
Inona avy ireo taratasy mety amin'ny fametahana taratasy?
Misy marika marobe eo amin'ny tsena natokana amin'ny fanaovana taratasy mety amin'ny fanontana pirinty, na inona na inona safidiana, dia tsy maintsy mahafeno ireto manaraka ireto:
Tokony manana kofehy landihazo avo lenta, satria ilaina ny mahazakan'ny taratasy mahazaka io tsindry io raha tsy vaky na vaky.
Tsy maintsy manana hateviny ampy izy io, satria efa voalaza rahateo, rehefa mampiasa io karazana fahatsapana io, a samy vokan'ny fanamaivanana sy fanamaivanana. Ny lanjany ampiasaina matetika amin'ny fanontana pirinty dia 350-400gr matetika, na dia azo atao aza ny mahazo taratasy manodidina ny 600gr.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Ny style Letterpress dia fomba iray anaovana indray
Studio fananganana sary mihetsika sasany izay mendrika ho fantatra tokoa
Drafitra famoronana hamoronana sary mihetsika na GIF